झापामा महिला मतदाता धेरै
झापामा ५ लाख ८५ हजार २२८ जना मतदाता
झापा, असोज २२ ।।
आगामी मंसीर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि झापामा महिला मतदाताको संख्या धेरै रहेको छ । झापामा ५ लाख ८५ हजार २२८ जना मतदाता कायम गरिएकोमा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाता ७ हजार ४८५ जना बढी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्गमा झापामा पुरुष मतदाताको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या धेरै भएको पाईएको हो । झापाका कुल मतदाता मध्ये महिला मतदाताको संख्या २ लाख ९६ हजार ३५२ छ भने पुरुष मतदाताको संख्या २ लाख ८८ हजार ८६७ रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको झापामा क्षेत्र नं. १ मा १ लाख ५हजार ४७५ मतदाता रहेका छन । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ मा १ लाख १८ हजार २०४ जना, क्षेत्र नं. ३ मा १ लाख १४ हजार ५८६ जना, क्षेत्र नं. ४ मा १ लाख ९ हजार ४०१ जना र निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा १ लाख ३७ हजार ५६२ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ ।
यस अघि गत असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापामा कुल ५ लाख १० हजार २१६ जना मतदाता थिए । त्यस अनुसार मंसीरको निर्वाचनका लागि झापामा ७५ हजार १२ जना मतदाता बढेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख आचार्यले झापा टाईम्स डटकमलाई जानकारी दिनु भयो । आचार्यका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा २८३ मतदान स्थलमा ६३७ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको भए पनि मंसीरमा हुने निर्वाचनका लागि भने मतदाता बढेकाले ५० वटा मतदान केन्द्र थप गर्नु परेको हो । मतदान स्थल थप भए पनि मतदान केन्द्र भने २८३ नै कायम गरिएको आचार्यले बताउनु भयो ।